छोरी प्रेमीसँग भागेपछि जरिवाना तोकियो, बाबुले आत्महत्या रोजे – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/छोरी प्रेमीसँग भागेपछि जरिवाना तोकियो, बाबुले आत्महत्या रोजे
१४ असार, सिराहा । लहान नगरपालिका वडा नम्बर २४ निवासी श्यामलाल रामको घरमा १२ गते शुक्रबार छोरीको डोली उठ्नुपथ्र्यो । बुबा श्यामलालले इष्टमित्रलाई खबर गरिसकेका थिए । दुलाहा पक्षलाई तिर्नुपर्ने दाइजोसमेत बुझाइसकेका थिए । बिहेका लागि चाहिने सबथोक जुटिसकेको थियो ।विडम्वना ! वर्षौंदेखि साँचेको शुक्रबारको खुसी आउनुअघि नै यो परिवारमा बज्रपात आइलाग्यो । नाचगान र भोजभतेरको तयारीमा रहेकाहरू शोकमा छन् ।
बिहीबार श्यामलालले आत्महत्या गरे ।श्यामलालले त्यसै आत्महत्या गरेका होइनन् । उनको मृत्युको कारक समाजमा व्याप्त गलत परम्परा र रीतिरिवाज बनेको छ ।छोरी प्रेमीसँग भागेपछि जरिवाना तोकियो श्यामलाल पाँच वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा थिए । घरमा आमा, बुबा, श्रीमती र दुई छोरीलाई छाडेर साउदी गएका उनी माघ अन्तिम साता घर फर्किएका थिए ।
उनकी जेठी छोरीको उमेर १९ वर्ष पुगिसकेको थियो । यो दलित समुदायमा सानै उमेरभन्दा बिहे गरिदिने चलन छ । त्यसैले श्यामलालले पनि छोरीको बिहे गरिदिने सोचे । बुबा र श्रीमतीसँग घरसल्लाह गरेपछि केटाको खोजी गरे ।छिमेकी जिल्ला सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–४ महुलियामा बन्दी रामका छोरा महेशसँग बिहे पक्का भयो । दाइजोबापत नगद २ लाख रुपैयाँ र चार तोला सुन ३२ जेठमा बुझाएका थिए । दाइजो बुझाएपछि असार १२ गते शुक्रबार बिहे हुने तय भयो ।
तर, श्यामलालकी छोरी अर्कै युवकसँग प्रेमसम्बन्ध थिइन् । बाबुले अर्कै केटासँग बिहे पक्का गरेर दाइजो बुझाएको थाहा पाएपछि उनी प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवकसँग भागिन् ।यसपछि सुरु भयो श्यामलालमाथि बज्रपात । जब केटा पक्षले केटी भागेको थाहा पाए, गाउँमा पञ्चायत (भेला) बसाए । याउँमा हुने यस्ता समस्याको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत गरिनुपर्ने हो, तर पुरानै चलन अनुसार गाउँलेहरुको ‘पञ्चायती’ बैठक बस्यो ।
समाजको न्याय पनि कस्तो ! श्यामलालले दाइजोवापत दिएको २ लाख रुपैयाँ र चार तोला सुन फिर्ता गर्ने कुरै भएन । श्यामलाललाई रातभर निन्द्रा लागेन ।त्यही रात केटा पक्षबाट सन्देश आयो, जेठी छोरी भागे पनि पनि कान्छी छोरीसँग विवाह गर्न तयार छौं ।’श्यामलालले धेरै सोचे । कान्छी छोरीको उमेर १५ वर्ष मात्र थियो ।
एक वर्षीया बालकसहित थप २८ जनाले जिते कोरोना